Andriamanitra dia manome ny tena fiainana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Manome ny fiainana marina Andriamanitra
Ao amin'ny sarimihetsika As Good as It Gets, Jack Nicholson dia nilalao olona tena masiaka. Sady sahirana ara-pihetseham-po sy ara-tsosialy izy. Tsy manana namana izy ary kely ny fanantenana ho azy mandra-pahatongany amin'ny tovovavy iray izay manompo azy ao amin'ny toeram-pisakafoanana eo an-toerana. Tsy toy ny olon-kafa talohany izy, fa nandalo fotoan-tsarotra. Nasehony azy àry ny saina, toy izany koa ny fihetsiky, ary nifanakaiky hatrany izy ireo rehefa nandeha ilay sarimihetsika. Tahaka ilay tanora mpandroso sakafo Jack Nicholson naneho hatsaram-panahy tsy mendrika azy, dia tojo ny famindram-pon’Andriamanitra koa isika amin’ny diantsika kristiana. Nanoratra i Miguel de Cervantes, mpanoratra espaniola malaza Don Quixote, fa “amin’ireo toetran’Andriamanitra, ny famindram-pony dia mamirapiratra lavitra noho ny fahamarinany”.
Fanomezana tsy mendrika ny fahasoavana isika. Matetika isika no mamihina ny namana iray mandalo fotoana ratsy amin'ny fiainany. Angamba isika mibitsibitsika mihitsy ao an-tsofiny hoe: "Ho tsara ny zava-drehetra." Raha ny teôlôjika dia marina isika miaraka amin'ny fanambarana toy izany. lasa.
«Tsy manao amintsika araka ny fahotantsika Izy ary tsy mamaly antsika noho ny helotsika. Fa tahaka ny haavon'ny lanitra ambonin'ny tany no ametrahany ny fahasoavany amin'izay matahotra Azy. Tahaka ny halavitry ny maraina amin'ny hariva no avelany ho amintsika ny fahadisoantsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanaka no fiantran'i Jehovah izay matahotra Azy. Satria fantany ny rafitra misy antsika; tsaroany fa vovoka isika » (Salamo 103,10- iray).
Nandritra ny hain-tany mafy teo amin’ny tany, Andriamanitra dia nandidy an’i Elia mpaminany hankany amin’ny Reniranon’i Krit mba hisotro, ary Andriamanitra dia naniraka ny goaika hanome hanina ho azy (2. Mpanjaka 17,1-4). Nikarakara ny mpanompony Andriamanitra.
Hiaro antsika amin’ny haben’ny hareny Andriamanitra. Izao no nosoratan’i Paoly ho an’ny Fiangonan’i Filipy: “Andriamanitro hahasitrana izay rehetra tsy maintsy anananao araka ny hareny amin’ny voninahiny ao amin’i Kristy Jesosy.” (Filipianina) 4,19). Izany no nitranga tamin’ny Filipiana, ary toy izany koa isika. Nampirisika ny mpihaino azy i Jesosy tao amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra:
Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo sy hosotroinareo; na ny amin'ny vatanao aza, na ny amin'izay hotafinareo. Tsy mihoatra noho ny hanina va ny aina, ary ny tena noho ny fitafiana? Jereo ny voro-manidina: tsy mamafy izy, tsy mijinja, tsy manangona ao an-tsompitra; nefa ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Tsy sarobidy lavitra noho ireny va ianao? (Matio 6,25- iray).
Noporofoin’Andriamanitra koa fa niahy an’i Elisa izy, rehefa nila fanampiana mafy i Elisa. Efa imbetsaka i Beni-hadada Mpanjaka no namory ny tafik’i Syria hiady amin’ny Israely. Isaky ny nanafika anefa izy, dia niomana ho amin'ny fandrosoany ny tafik'Israely. Noheveriny fa nisy mpitsikilo tao an-toby, ka namory ny jeneraliny izy ka nanontany hoe: “Iza moa no mpitsikilo eto amintsika?” Ary hoy ny iray taminy: “Tompoko, i Elisa mpaminany io, ary ny mpanjaka mihitsy no mahalala ny momba azy. hatramin'ny. " Koa nodidian’i Beni-hadada Mpanjaka ny tafiny hanafika an’i Dotana, tanàna niavian’i Elisa. Azontsika sary an-tsaina ve hoe nanao ahoana ny endriny? “Arahaba, ry Beni-hadada mpanjaka! Hankaiza ianareo? Dia namaly ny mpanjaka hoe: Horaisinay ho babo io mpaminany kely io. Rehefa tonga tany Dotana izy, dia nanodidina ny tanànan’ny Mpaminany ny tafiny lehibe. Nivoaka hantsaka rano ny zatovon’i Elisa, ary nony nahita ny miaramila be dia be izy, dia raiki-tahotra ka nihazakazaka nankany amin’i Elisa ka nanao hoe: “Tompo ô, ny miaramilan’i Syria hamely antsika; Inona no tokony hataontsika?” Hoy i Elisa: “Aza matahotra, fa maro ny momba antsika noho ny momba azy!” Tsy maintsy nieritreritra ilay tovolahy hoe: “Tsara fa misy tafika lehibe manodidina antsika any ivelany ary misy adala mitsangana miaraka amiko ato. Nivavaka anefa i Eliza hoe: “Tompo ô, ampahirato ny mason’ilay tovolahy mba hahitany!” Ary nampahiratin'Andriamanitra ny masony, ka hitany fa ny miaramilan'i Syria voahodidin'ny miaramilan'ny Tompo sy ny soavaly afo sy ny kalesy afo be dia be;2. Mpanjaka 6,8- iray).
Ny hafatry ny Soratra Masina dia azo antoka fa izao: Indraindray isika dia mahatsapa fa very ny herim-po amin'ny diantsika eo amin'ny fiainana sy ny zava-misy dia nahatonga antsika ho any amin'ny lavaka tsy hita noanoa. Ekena fa tsy afaka manampy ny tenantsika isika. Amin'izay dia afaka miantehitra amin'i Jesosy sy ny hafany hikarakara antsika. Izy no hanome antsika fifaliana sy fandresena. Manome antsika fiainana mandrakizay izy tahaka ny rahalahy iray rahavavy malalany. Aza adino na oviana na oviana izany. Andao hatoky azy!